In ka badan 10 ruux oo ku Geeriyootay iska Horimaad Ciidamo ka Tirsan dowlada ku dhaxmaray Muqdisho. – SHABAKADA HIIRAAN XOG
[ 21/02/2019 ] HomeNewsBusinessArticlesPhotos Home News AMISOM reviewing logistical support offered to troops NEWSAMISOM reviewing logistical support offered to troops	English News
[ 21/02/2019 ] DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaare Kheyre oo soo xeray shirkii Qaranka ee magaalada Muqdisho	Arimaha Bulshada
[ 21/02/2019 ] DAAWO SAWIRO:- Shirka Golaha Xukuumada maanulka Jubbaland oo looga hadlay qodobo kala duwan.	Arimaha Bulshada
[ 21/02/2019 ] DAAWO SAWIRO:- Ciidamada Galmudug oo gacanta ku dhigay Hub iyo Risaas ku sii jeeday gobolka Hiiraan	Arimaha Bulshada
[ 21/02/2019 ] Askari ka tirsan ciidamada dowlada Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah	Arimaha Bulshada
HomeWararka SoomaaliaIn ka badan 10 ruux oo ku Geeriyootay iska Horimaad Ciidamo ka Tirsan dowlada ku dhaxmaray Muqdisho.
In ka badan 10 ruux oo ku Geeriyootay iska Horimaad Ciidamo ka Tirsan dowlada ku dhaxmaray Muqdisho.
16/11/2015 Wararka Soomaalia 0
Ugu yaraan 10-qof oo shacab iyo ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Somalia isugu jiray ayaa ku dhintay iska-horimaad ciidamo kawada tirsan kuwa dowladda Somalia ku dhexmaray goob kaarar loogu qaybinayay dad shacab ah oo ku taalla degmada Dayniile ee gobolka Banaadir.
Iska-horimaadkan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 19-qof oo dad rayid ah u badnaa, iyadoo dadka dhintayna uu ku jiray wiil yar oo sagaal bilood jir ah, waxaana dhaawacyada la geeyay Isbitaalka Madiina.
Goob-joogayaal ayaa warbaahinta uu sheegay in dagaalkau uu dhexmaray ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Somalia, kuwaasoo qaarkood soo gaaray goobta kaararka loogu qaybinayay barakacayaasha, kuwaasoo ciidamadoo horay goobta ugu sugnaa iyo iyagu ay ku murmeen barakacayaal ay doonayeen inay gudaha u geliyaan goobta, iyadoo ciidamadii kalena ay diideen, taasoo sababtay inay xabbadi billaabato.
“Rasaas badan ayaa goobta ka dhacday, waxaan arkay dad badan oo dhulka ku daadsanaa, kuwaasoo isugu jiray dhaawacyo iyo dhimasho, waxaanan arkayay wiil sagaal bilood jir ah oo ka mid ah dadkii dhintay,” ayuu yiri goobjooge ka mid ahaa dadkii barakacayaasha ahaa ee goobta joogay.
Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho oo arrintan ka hadlay ayaa ciidammadii dagaallamay ku tilmaamay mooryaan, isagoo xusay in qaarkood gacanta lagu dhigay iyagoo dhaawacyo qaba, kuwii kalena baadi-goob lagu hayo.
“Kooxo mooryaan ah ayaa laayay dadka shacab ah oo ku sugnaa Haanta-dheer oo ka tirsan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, qaarkood iyagoo dhaawacyo qaba ayaan gacanta ku dhignay, kuwii kalena ciidamada nabad-sugidda ayaa raadinaya,” ayuu Yuusuf Xuseen Jimcaale u sheegay warbaahinta.
Agaasimaha Isbitaalka Madiina, Duniyo Maxamed Cali oo iyana la hadashay warbaahinta ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyay 19-dhaawacyo kala duwan qaba, qaarkoodna ay isbitaalka ku dhinteen, kuwii kalena qalliinno iyo daweyn ay u sameeyeen.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, ayaa diiday in lagu tilmaami karo ciidamadii uu maanta dagaalku dhexmaray ciidammo dowladeed, isagoo ku sheeegay hadalkiisa inay ahaayeen mooryaan hubeysan oo dilaayaal ahaa.
DAAWO SAWIRADA: Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Muqdisho ka Daah furay shirka wadatashiga Qaran.
Guddi loo Saaray dilkii Madaxii Ha’yada Main Action ee Gobolka Hiiraan oo Gaaray Beledweyne,